Cristiano Ronaldo oo fariintan diray kadib sanad guuradiisii 34-aad – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo fariintan diray kadib sanad guuradiisii 34-aad
Dajiye February 6, 2019
(Juventus) 06 Feb 2019. Weeraryahanka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay inuu u dabaal dago sanadkiisii 34aad isaga oo xiran maaliyada kooxda Juventus, wuxuuna sidoo kale xaqiijiyay tijaabinta loolankan cusub.
Cristiano Ronaldo ayaa u dabaaldegay sanadkiisii 34-aad isaga oo xiran maaliyada kooxda Juventus, kadib markii uu xagaagii lasoo dhaafay kaga soo dhaqaaqay Real Madrid aduun dhan 105 milyan oo euro.
Ciyaaryahanka reer Portugal ayaa ku sheegay hadal uu ku yiri TV-ga kooxda JUventus, inuu ku faraxsan yahay in uu u dabaal dego 34-jirkiisa isaga oo ku sugn dalka Talyaaniga, sababa la xiriira naxariista uu ka helay dalkan.
“Waxaan u mahadcelinayaa taageerayaasha kooxda Juventus sababa la xiriira dareenka ay ii muujiyeen, waxaan nasiib ku leeyahay inaan u ciyaaro kooxdan,
“Qof walba si fiican ayuu iila dhaqmaa, waan jeclahay magaalada Turin, waa magaalo qurux badan isla markaana xasilooni ah”.
“Qoyskeyga iyo anigaba waan faraxsanahay, waxaan hogaamineynaa horyaalka, waxaan gaarnay wareega 16-ka ee tartanka Champions League, sidoo kale waxaan ku guuleysanay Supercoppa Italiana, waxaan diyaar u nahay xiliyada soo socda”.
Jesse Lingard oo daaha ka rogay in isaga iyo Rashford ay SHARAD ku galeen hal arin
Kahor kulanka El Clásico madaxweynaha Barcelona oo ka hadlay mustaqbalka tababare Valverde